မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Guangzhou Meiyi Electronic Technology Co. , Ltd.
မဟုတ်ပါ၊ သင်သွင်းရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ သင်ကုန်ပစ္စည်းရသောအခါ၎င်းသည်ပါဝါဖွင့်ပြီးနောက်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်၏ထုတ်ကုန်၏ဗို့အားနှင့် plug သည်ကျွန်ုပ်၏စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီပါက?
သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ကုန်ပစ္စည်းအောင် ပြုလုပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုဂိုကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါက။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်နာအဖွဲ့ရှိသည်။ အရောင်၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊
ဟုတ်ကဲ့! ဒါကအရေးကြီးတဲ့အထောက်အပံ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ၁ နှစ်အာမခံ + သက်တမ်းတစ်သက်တာအတွက်နည်းပညာအထောက်အပံ့။ (PCB တစ်နှစ်အခမဲ့အာမခံ၊ အမြန် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောအစိတ်အပိုင်းသုံးလအာမခံ။ ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရှင်များသည်သင့်အားစိတ်ရှည်စွာအွန်လိုင်းပေါ်တွင်လမ်းပြပေးမည်၊ ဖောက်သည်အတွက်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများပါ ၀ င်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပြုလုပ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်မည်ကဲ့သို့တပ်ဆင်ပုံနှင့်မည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုပြသသည်။ ) အပိုပစ္စည်းအားလပ်ချိန်များကို ၀ ယ်ယူသူအားငွေပေးချေခြင်း (သို့) အခကြေးငွေမပေးဘဲကျွန်ုပ်တို့အစားထိုးမည်။
ကျနော်တို့ဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် 12 နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူများကသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောမည်သည့်စက်ကိုမဆို ၀ ယ်ရန်ကူညီပေးသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အလွန် ၀ မ်းသာပါသည်။ ငါတို့အတွက်အရမ်းလွယ်တယ် ဝန်ဆောင်မှုသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်
စက်အားလုံးသည်အသစ်စက်စက်အရည်အသွေးမြင့်အစိတ်အပိုင်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ ဒီတော့စက်တွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်စွာအသက်ရှည်နေပြီးအမှားပြlessနာနည်းတယ်။ ဖောက်သည်များသည်မကြာမီပြန်ဆပ်နိုင်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအမြတ်အစွန်းရနိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်၏နိုင်ငံသို့တရုတ်နိုင်ငံသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်သင်တာ ၀ န်ရှိသည်။ သင်၏ဒေသအကောက်ခွန်ဌာနမှကုန်ပစ္စည်းများရရှိရန်အကောက်ခွန်များကိုရှင်းလင်းရန်သင့်အားကူညီပေးရန်ထုံးစံပွဲစားကိုသင်ရှာဖွေရလိမ့်မည်။
၂။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်၏မြို့အနီးရှိ destination port သို့ပို့မည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုဒေသခံအကောက်ခွန်မှရရှိရန်အကောက်ခွန်များကိုရှင်းလင်းရန်သင့်အားကူညီပေးမည့်သဘောင်္တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ သင်သည်တရုတ်နိုင်ငံမှအချိန်ကြာမြင့်စွာတင်သွင်းလိုပါက၊ သင်သည်ပထမနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ သင်၏ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးကုမ္ပဏီကိုသင်မသိပါကကျွန်ုပ်သည်သင့်အားယုံကြည်ရသောကိုယ်စားလှယ်အချို့ကိုအကြံပြုနိုင်သည်။
အချိန်ကွဲပြားခြားနားသောဆိပ်ကမ်းကိုကွဲပြားခြားနားသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရမယ်’ရေကြောင်းဖြင့်တစ်လ၊ အလုပ်ချိန် ၃-၇ လေယာဉ်ဖြင့်ဖြစ်သည်။